बुलशन - मेरो वरिपरिका कथाहरु
मैले सोधेको थिएँ, “दाइ, अरु पनि तपाईंजस्तै मान्छे जन्माउनु प¥यो नि त । नेपाली भाइहरुलाई सिकाउने गर्नुहुन्छ ?”
“इक्स्पिरियन्स छ भने मात्र राख्छु।”
“सबैले इक्स्पिरियन्स भएको मात्र खोज्ने हो भने त कहिले चान्स पाउने त दाइ ?”
“मेरो त सानो वर्कसप हो। अब एक जनालाई सिकाउँदा गाडीको लाइन लाग्छ, अनि के गर्ने ? भनन । अहँ । टिचिङ्ग गर्न त झन् सक्दै­सक्दिन म, भाइ। नोवे ।”
पढाउने मामिलामा भने मलाई स्पष्टसँग ‘आउँदैन’ भनेर भनेको मन पर्छ । कति यस्ता टिचरहरु देखेको छु, जसका लागि पढाउनु भनेको पेशा मात्र हुन्छ, त्यो पनि कसैले लगाइदिएर । अनि त्यो पेशाको जिम्मेवारी भने कत्ति पनि बोध नहुने।
“बरु ज्याला–मज्दुरी गर्छु, पढाउने काम त म गर्न सक्दिन “ भनेर भन्ने धेरै साथी भेट्छु ।
कतै भने “एपीआइएल” एप्पल भनेर पढाउनेहरु पनि छन् ।
बम्जन दाइ खुब फरासिला लाग्यो मलाई । उनले रमाइला गफ गर्दै आफ्नो काम खुरुखुरु गरिरहे ।
“मेरोमा भेटिन्छ अनेक अनेक खालका मान्छेहरु । कोही आउ“छ, ‘दाइ यस्तो भयो’ भन्छ, कोही ‘दाइ उस्तो भयो भन्छ’ ।
अरु त सबै ठीकै हो, बूढाबूढी झगडा गरेको कुरा समेत आएर मलाई सुनाउ“छन्”, उनले भने ।
“किन दाइ, तपाईंको घरको आफ्नै कथाले त्यस्तो सुन्न मन लाग्दैन कि क्या हो ?” भनेर सोध्न मन लागेर पनि सोधिन् ।
त्यही बेलुका हरि भाइहरुकहा“ मोःमो पार्टीमा त झन् रमाइला रमाइला कुरा सुन्न पाइयो । सबै जोडी जोडी थिए । आफ्नी श्रीमतीलाई गाडी सिकाउ“दाको कथा सुनाउ“दै थिए ।
त्यसै गरी बुढीहरु चाहि“ “बरु तपाईं छेउमा नबस्ने हो भने राम्रो चलाउ“छु, तपाईं छेउमा हुने हो भने त त्यसै पनि डराउन दिनु हुन्छ” भन्दै थिए ।
“अनि स्पिड लिमिटभन्दा बढी भएपछि नभन्ने ?” एउटा साथीले आफ्नी श्रीमतीको कमेन्ट आफैँलाई हो भन्ने बुझेपछि आफ्नी श्रीमतीलाई सोधे ।
“मेरो बूढाले पनि मैले शुरुशुरुमा सिक्दा त खाली गाडी अलिकति स्पिड ग¥यो कि, डराएर यसो गर्, उसो गर् भनेरै हैरान पार्ने गर्नु हुन्थ्यो ।
अनि फेरि ग्रीनलाइट ड्राइभिङको दाइस“ग फेरि क्लास लिए“ । त्यो दाइले बरु मज्जाले सिकाइदिनु भयो, अनि अहिले त आफैँ चलाउ“छु ।”
बूढाहरुले सिकाउन त नसकिने नै होला ।
हरि भाइ अलि टाठा भएर बस्दै भने, केहि कथा भन्न थालेको जस्तो गरी ।
“अस्ति के भयो सुन्नु न ।”
“एक जनाले बूढीलाई गाडीमा हात बसाल्न भनेर लिएर एम्फोर्मा गएका रे, बूढी त रिसाएर गाडी साइडमा लगाएर हिँड्दिई रे ! फोन, पर्स सबै छोडेर, फोन गर्छ त फोन त गाडी भित्रै बजेको रे के !”
सबै फेरि गलल्ल हा“से । कतिले त आफ्नै घटना सम्झिए होलान् ।
“तिमीले नै भनेको होइन ?” अरुण दाइले हरि भाइलाई सोधे ।
“के दाइ ?”
“टनेलमा गाडी छोडेर हिँड्यो को हो भनेर ?”
“ए, अ“ त । यो त झन् बिर्सेको”, हरि भाइ जोस्सिए अर्को कथा सुनाउन ।
“टनेलबाट गैरहेको रे होइन ?” मोःमो खा“दै उनले भने, “बूढाबूढीको कुरैकुरामा झगडा भएछ ।”
उनले बूढाबूढी भन्दा चाहि“ मुखमा मोःमो भएकोले स्पष्ट सुनिएको थिएन । तर, अघिदेखि नै बूढाबूढीको कुरा भइरहेका कारण मैले अनुमान लगाए“ ।
“अनि सोल्टी त बूढी र गाडी टनेलमै छोडेर चल्दिएछ ।”
“कस्तो ? कहिले बूढीको पालो, कहिले बूढोको पालो त ?” मैले बीचैमा सोधे“ ।
“यो त अर्कै कपल हो, धेरैजनाको कथा यस्तै हुन्छ, दाइ”, उनीहरुले भने ।
सबै फेरि हा“से ।
“तर आवेगमा, त्यो माथि गाडीमा भएको बेलामा दुर्घटना भयो भने त बर्बाद पो हुन्छ त !”
“त्यो त हो नि”, एउटी बहिनीले भनिन् ।
“त्यही भएर त मलाई गाडी चलाएको बेला कचकच नगर भन्छु नि म”, उनका श्रीमान्ले भने ।
“त्यही भएर त मैले पनि गाडी मैले चलाउ“दा तपाईं नकराउनु भन्छु नि !” जवाफ आयो, तुरुन्तै ।
“तर बूढीले गाडी सिक्ने हो भने चाहि“ एउटा फाइदा छ”, एउटा साथीले भनेका मात्र के थिए, उनकी श्रीमतीले जवाफ दिइहालिन् ।
“पार्टीमा ड्राइभ गर्ने टेन्सन नलिई ड्रीङ्क गर्न पाइन्छ भन्न खोजेको त होला नि !”
सबै जना हा“से ।
“मैले ड्राइविङ जान्दाको अरु फाइदाहरु चाहि“ के नि ?”
“धेरै छ नि, मेरी रानी ।”
उनले त्यतिमै कुरा सकाउन खोजे ।
अनि मोःमोको सेकण्ड राउण्डतिर लागे सबै ।